Mite bite: iifoto, iziphumo kunye neempawu kubantu
Kule nqaku, uya kufunda ngengozi ebangelwa zizibilini zempilo yabantu, kunye nokuba yiyiphi impawu kunye neemphumo kwixesha elizayo. I-tick bite, njengowesithombeni, iyingozi kakhulu, ngenxa yokuba ungayibamba i-encephalitis okanye i-borreliosis. Ezi zifo zineempembelelo ezimbi. inokuchaphazela intliziyo, amajoyino, iinzwa, isikhumba. I-encephalitis ephathekayo ityhubhu isifo esithathelwanayo.
Unokuzikhusela njani kwikethi? Kwabo abaya ehlathini ixesha elide, ugonyo olubhekiselele kwi-encephalitis ekhutshwe ngekhaksi luseyona ndlela efanelekileyo yokukhusela. Ukukhusela ekuxeni kwekhakiti kuya kunceda kunye nokugqoka: ukuba umntu ugqoke ngokuchanekileyo, ngoko imithi ayifuni kwesikhumba. Gqoka ibhantshi kunye nejacket, kunye ne-headdress. Iigantshi kufuneka zikhishwe kwiisokisi, ishati yokuzibophelela zonke iifowuni kwaye zifake kwiibhulukhwe, iimpahla zeemikhono zifanele zilungele umzimba. Izambatho ezifanelekileyo zokuhamba ehlathini liyijekethi okanye i-raincoat ene-hood eyokukhusela intloko nentamo. Kukwacetyiswa ukuba kusetyenziswe amanxusa athile ahlambulukileyo - ama-repellents, ayenze ayenze i-cuffs, i-collars cuffs. Iindwendwe zibuye zithengiswe kwiivenkile, iifommitha. Emva kokushiya ehlathini, kufuneka uhlolisise wena kunye neengubo zakho. Iikitikiti zingeniswa ekhaya kunye nebhekethi. Ikhakiti inokuhamba kunye neentyatyambo zeentyatyambo, kunye nama-mushroom, kunye namajikijolo, zifihla ubomvu benja ebenakho.
Iikitikithi ziva umntu ngomitha 10-15. Ngoko ke, emikhondweni zihlala zihlala zikhona kunezona ziphantsi kwehlathi. Ikhakiti inokuqhotyoshelwe kuphela kwiindawo ezithile. Ukhangele ulusu elincinci (emva kweendlebe, phantsi kwesifuba, entanyeni, kwi-bend bow, kwi-groin, esinqeni). Ukuluma kwayo kufana neliso - phakathi kwendawo epholileyo, kulandelwa umgca omhlophe kunye nokuqhekeka emacaleni. Ukubetha kwe-Mite kufuneka ukwesatshiswa ngakumbi ukususela ekupheleni kukaMeyi ukuya ngasekuqaleni kweJulayi, xa bekhulile. Kodwa ukuxhamla kwamatyala ekhayi ngoSeptemba akukhangeli.
Iimpawu zokukhawulwa kwekhayi kubantu
Usulelo luqala ngokugqithiseleyo kwaye luhamba kunye neempawu ezilandelayo: iqondo lokushisa liphakama, kukho intloko, intlungu kwiimbumba zebhande kunye nentamo. Ukongeza, isigulane sinokufumana isicathulo, ukuhlanza, isisu esiswini, isifo sohudo, ukukhupha. Amehlo aqala ukulimaza, angakwazi ukukhathala izandi ezibukhali. Ukushisa komzimba kwisigaba sokuqala sesifo kunokunyuka kuma-38 ° C. Unokuphiliswa kuphela ngoncedo lwee-antibiotics ezikhethekileyo. Izibindi azikwazi ukundiza, kodwa ziyakwazi ukunyuka emahlathini, utshani obude ukuya kumitha engama-1.5-2, kunye nokucwangcisa ngempumelelo ngumoya womoya, ugxile kwivumba labantu okanye izilwanyana.
Yintoni endiyenzayo xa ikethi ikhala?
Iziphumo kunye neempawu ezisuka kwi-tick bite ngenxa yomntu ngamnye ahlukeneyo, ukuba sele sele uyibonile, ngoko nangoko kufuneka uzalise ngeoli yemifuno. Kodwa nangona sikhundla, uya kuhlala ixesha elide, ngelixa ebalalisa umgca osulelekileyo. Ngoko ke, kuyona nto ingcono ukususa ikethi ngokukhawuleza. Zama ukukrazula ngeminwe yakho kuqala. Ukuba le nto ihluleka, zibophe isisu esiswini sekiti kunye nentambo eqinile uze uyikhuphe. Kule meko, i-proboscis yekethi ingakwazi ukuhlala phantsi kwesikhumba. Kunzima kakhulu ukuyikhupha, ngoko akufanelekile ukuzama. Kwanele ukuzalisa indawo echaphazelekayo nge-iodine. Kwimeko nayiphi na into, soloko ucela uncedo lwezokwelapha ukuqaliswa kwe-gamma globulin echasayo. I-mite ekhutshiwe ayikwazi ukucinywa, kuba kunye neziqulatho zayo ezincinci zesikhumba zinokufumana intsholongwane, nto leyo eya kubakho kwimiphumo emibi. Ngako oko, inambuzane kufuneka isatshiswe, kodwa kungcono ukuyihambisa kwi-laboratory ekhethekileyo ukuhlalutya. Ukuba uphawu lusulelekile, umntu omelekileyo kufuneka ahlolwe ngogqirha wesifo esithathelwanayo.
Kutheni ibuhlungu phantsi kombhobho ongasekhohlo ngaphambili?
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye-axinite
Ukusetyenziswa kweoli elecampane ebalulekileyo
Ubuso besikhumba kunye nokugqithisa
I-pike ipakeki kunye nemifuno kunye nemifuno yesibini
Indlela yokunyamekela ngokufanelekileyo izilwanyana
Indlela yokujamelana nokuxhamla ubisi
Izidlo ezifanelekileyo kakhulu zesisu
Isaladi kwi-eel kunye ne-crawfish